Muwaadinnimada Antigua iyo Barbuda - Qoyska Real Estate
Si aad ugu qalanto muwaadinimada iyada oo la raacayo doorashada hantida maguurtada ah, dawladdu waxay ka dooneysaa codsadayaashu in ay maalgashi ku sameystaan ​​qaab dhismeed rasmi ah oo la ansixiyay kaas oo ugu yaraan ugu yaraan US $ 400,000 oo lagu daray bixinta khidmadaha howlaha dowladda iyo khidmadaha habboon awgeed.
Hal codsade keliya, ama qoys 4 jira ama wax ka yar ah
Khidmaddaha socodsiinta: US $ 30,000
Qoyska 5 iyo ka badan: -
$ US $ 150,000 tabaruc
Kordhinta Kharashaadka: US $ 30,000 oo lagu daray US $ 15,000 mid kastoo ku tiirsan
Laba (2) codsi oo ka socda xisbiyada la xiriira ayaa sameyn kara maalgashi wadajir ah, iyadoo codsade walba uu maalgaliyo ugu yaraan $ 200,000 US si uu ugu qalmo. Dhammaan howlaha iyo ujrooyinka waajibka ah ee shaqaaluhu weli isma beddelaan.
Intaas waxaa sii dheer, laba codsade ama wax kabadan oo fuliya iib iib iyo heshiis iibsasho ayaa si wada jir ah u codsan kara dhalashada maalgalin ahaan haddii la codsade kasta uu ku biiriyo maalgashiga ugu yar ee US $ 400,000.
Lahaanshaha ka-faa'iideysiga hantida maguurtada ah waa la oggol yahay iyada oo loo marayo shirkad aan macaash doon ahayn haddii ay shirkaddu soo saartay dhammaan saamiyadeeda la oggolaaday ee codsadaha (yaasha), la aasaasey oo ay meel fiican ka taagan tahay sharciga Antigua iyo Barbuda, ma ahan mid laga dhaafay. ama shirkad ka socota dibedda waxayna soo gudbiyaan caddeyn aan laga ceshan karin lahaanshaheeda faa'iido leh, caddeyntaas waxaa caddeyn doona Diiwaan Geliyaha Shirkadaha.
Maaddaama habka dalabka ee doorashadan uu ku lug leeyahay iibsashada guryaha, tani waxay dheereyn kartaa waqtiga howsha iyada oo ku xiran hantida la doortay. Hantida maguurtada ah dib looma iibin karo ilaa 5 sano ka dib iibsashada, haddii aan la iibsan guryaha kale ee si rasmi ah loo oggol yahay ee Antigua iyo Barbuda.
Codsiga muwaadinimada iyadoo la adeegsanayo habka maalgashiga hantida maguurtada ah waxaa loo gudbin karaa Qaybta Maalgashiga (CIU) markay iibsato iyo heshiis iib ah la saxeexo soosaaraha mashruuca la ansixiyay, kaas oo ku xirnaan doona oggolaanshaha Codsiga dhalashada.
Markaad soo gudbiso dalabkaaga waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso ajuurada dadaalka iyo 10% lacagta khidmadda dowladda. Markaad hesho warqad oggolaansho waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso isku-dheellitirka khidmadda hawsha dawladda iyo isugeynta lacagaha oo dhan taas oo ay ugu wacan tahay soo-saareha ka hooseeya iibka iyo iibsashada heshiiska si uu awood ugu siiyo in magacaaga lagu diiwaangaliyo oo loo oggolaado hirgelinta soo jeedinta dhabta ah. maalgashiga hantida iyadoo la raacayo tilmaamaha ay dejisay Qaybta Dhalashada ee Qeybta Maalgashiga (CIU).
Markii la helo, shahaadada diiwaangelinta ayaa la siin doonaa codsadaha aasaasiga ah iyo xubnaha qoyskooda ee u baahan doona in loo gudbiyo xafiiska baasaboorka arjigooda iyo wixii dukumiinti la socda.
Wakiilkaaga / wakiilkaaga idman ayaa kaala talin doona taariikhaha ay heli karaan midkoodna;
Booqo Antigua iyo Barbuda si aad u soo qaadato baasaboorkaaga oo aad u dhaarato ama aad u dhaarato daacadnimada
Booqo Safaarad, Gudi Sare ama Qunsuliyada Antigua iyo Barbuda si aad u soo aruuriso baasaboorkaaga oo aad u dhaarato ama aad u dhaarato. Xiriirka Safaaradaha / Guddiyada Sare / Xafiisyada Qunsuliyada ee lagu muujiyey bog kale.
Ku soo noqo jinsiyadda Antigua iyo Barbuda